ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘိုဂူရာခရိုင်တစ်ဝန်းရှိ မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ရေအောက်နစ်မြုပ်လျက်ရှိ - Xinhua News Agency
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘိုဂူရာခရိုင်တစ်ဝန်းရှိ မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ရေအောက်နစ်မြုပ်လျက်ရှိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့် နေအိမ်များအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘိုဂူရာ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ စက်တင်ဘာ ၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့် နေအိမ်နံဘေးရှိ လှေပေါ်တွင် မြေမီးဖိုဖြင့် ချက်ပြုတ်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ပြတင်းပေါက်ဘောင်မှီလျက် မတ်တပ်ရပ်ကာ ရေဖုံးလွှမ်းနေသည်ကိုကြည့်ရှုနေသည့် မိန်းကလေးတစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ငှက်ပျောပင်အားဖောင်ပြုလုပ်ကာ ရေပြင်အားဖြတ်ကူးနေသည်ကို စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့် နေအိမ်တစ်လုံးအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့် နေရာအား လှေဖြင့်ဖြတ်သန်းနေသည့် ဒေသခံများကို စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရာဘာတာယာအား ဖောင်ပြုလုပ်ကာ ရေဖုံးလွှမ်းသည့်နေရာကို ဖြတ်သန်းသွားနေသည့် ကလေးငယ်တစ်ဦးအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့်နေရာကို ဖြတ်ကူးနေသည့် ဒေသခံများအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၉၇ ကီလိုမီတာခန့်အကွာရှိ ဘိုဂူရာခရိုင်တွင် ရေလွှမ်းမိုးနေသည့် ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ခင်းများအား စက်တင်ဘာ ၆ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘိုဂူရာခရိုင်တစ်ဝန်းရှိ မြေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး ရေလွှမ်းမိုးခြင်းခံရပြီး နေအိမ်များနှင့် ကောက်ပဲသီးနှံစိုက်ခင်းများ ရေဖုံးလွှမ်းခဲ့ကြောင်း နှင့် ဒေသခံများလည်း ဖောင်များ၊ လှေများဖြင့် ရေလွှမ်းမိုးသည့်နေရာများတွင် ဖြတ်သန်းသွားလာနေရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Asia Album: Large swaths of land across Bangladesh’s Bogura district underwater due to seasonal flooding
Source: Xinhua| 2021-09-07 10:15:30|Editor: huaxia
BOGURA, Bangladesh, Sept.7(Xinhua) — Seasonal flooding has left large swaths of land across Bangladesh’s Bogura district underwater. Houses and crop fields are inundated while people paddle rafts and boats to cross flooded areas.
1- Aerial photo shows flood-affected houses in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh on Sept. 6, 2021. (Xinhua)
2- A woman cooks on an earthen oven onaboat beside her flood-affected house in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh on Sept. 6, 2021. (Xinhua)
3- A girl stands againstawindow frame and looks at flood water around her house in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh on Sept. 6, 2021. (Xinhua)
4- Two boys paddle banana tree rafts to crossaflooded area in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh on Sept. 6, 2021. (Xinhua)
5- Photo taken on Sept. 6, 2021 showsaflood-affected house in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh. (Xinhua)
6- Photo taken on Sept. 6, 2021 shows local people rowingaboat throughaflooded area in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh. (Xinhua)
7- A boy paddlesaraft made of rubber tyre tube to crossaflooded area in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh on Sept. 6, 2021. (Xinhua)
8- Photo taken on Sept. 6, 2021 shows local people wading throughaflooded area in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh. (Xinhua)
9- Photo taken on Sept. 6, 2021 shows flood-affected crop fields in Bogura, some 197 km northwest of Dhaka, Bangladesh. (Xinhua)■
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံက ရေငုပ်င်္ဘောမှပစ်ခတ်နိုင်သည့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် စမ်းသပ်ပစ်ခတ်